jacquard fabric Factory | China jacquard jira Vagadziri, Suppliers
Tsanangudzo Iyi polyester micro mesh jira, chinyorwa chedu nhamba HS667, yakarukwa ne100% polyester. RPET jira kana recycled polyethylene terephthalate rudzi rutsva rwezvinhu zvinogadziriswa uye zvakagadzikana zviri kubuda. Kushandisa jira iri kunogona kuderedza zvinhu zvepurasitiki, kunyanya mabhodhoro emvura, kubva kumakungwa edu nemarara. Iri jira rakadzokororwa rinofema uye rakasununguka, rinoita kuti rive jira rakakodzera kwazvo ...
Chigadzirwa Tsananguro: Iri jacquard mesh jira, chinyorwa chedu nhamba HS790, yakarukwa ne100% polyester. Iyo polyester jacquard yakarukwa jira inoratidzira shiri yeziso patani, inofema uye yakagadzikana, iyo inoita kuti ive jira rakakodzera kwazvo rezvipfeko zvemitambo, kushingaira kupfeka, jersey remitambo, mutambo wepamusoro uye wakajairika kupfeka etc. Tinogona kugadzira basa rakasiyana rejira zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi zvakadaro sezvo hunyoro wickin ...
Description Yechigadzirwa: Iri jacquard mesh jira, chinyorwa chedu nhamba HS310, yakarukwa ne100% polyester. Iyo polyester jacquard yakarukwa jira inoratidzira hexagonal pateni, inofema uye yakagadzikana, iyo inoita kuti ive jira rakakodzera kwazvo rezvipfeko zvemitambo, kushingaira kupfeka, jersey remitambo, sport top uye casual kupfeka etc. Tinogona kugadzira basa rakasiyana rejira zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi kunge mwando w...
Description Yechigadzirwa: Iri jacquard rakarukwa jira, chinyorwa chedu nhamba HS101, yakarukwa ne100% polyester. Iyi jacquard inofema uye yakagadzikana, iyo inoita kuti ive jira rakakodzera kwazvo remitambo, kushingaira kupfeka, yoga kupfeka, sport top, tank top uye casual kupfeka etc. -yakaoma uye inorwisa mabhakitiriya. Kuti ndione...
Kutengeswa kunopisa 100% polyester jacquard yakarukwa jira re t-shirt
Description Yechigadzirwa: Iyi jacquard yakarukwa jira, chinyorwa chedu nhamba HS006, yakarukwa ne100% polyester. Iri polyester jacquard rakarukwa jira rinofema uye rakakwana kune t-shirt, zvipfeko zvemitambo, kushingaira kupfeka, jersey remitambo, sport top uye mapfekero akajairika etc. -bacteria etc. Kuti usangane nestri...
Kutengeswa kunopisa 100% polyester yakarukwa micro mesh jira rehembe
Description Yechigadzirwa: Iyi jacquard yakarukwa mesh jira, chinyorwa chedu nhamba HS239, yakarukwa ne100% polyester. Iri jira re micro mesh rakareruka, rinofema uye rakasununguka. Izvo zvakakwana kune zvemitambo, kushingaira kupfeka, lining, sport top uye casual wear etc. Tinogona kuita mabasa akasiyana-siyana emucheka maererano nezvinodiwa nemutengi, kufanana nekunyorova, kuoma-kuoma uye anti-bacteria. Kuti usangane ne...
100% Polyester weft yakarukwa plaid jacquard jira rekushanda zvipfeko uye lining
Chigadzirwa Tsanangudzo: Iri jacquard rakarukwa jira, chinyorwa chedu nhamba HS348, yakarukwa ne100% polyester. Iyo polyester jacquard yakarukwa jira ine plaid mameseji. Hairemi, inofema uye yakasununguka. Yakanakira zvipfeko zvemitambo, kushingaira kupfeka, lining, sport top uye casual wear etc. Tinogona kugadzira mabasa akasiyana-siyana emucheka maererano nezvinodiwa nemutengi, sekunyorova, kukurumidza kuoma uye ...
100% polyester micro mesh jacquard rakarukwa jira remitambo shati
Chigadzirwa Tsananguro: Iyi diki mesh jira, chinyorwa chedu nhamba HS147, yakarukwa ne100% polyester. Iyo polyester jacquard yakarukwa jira ine pini dot pateni. Inofema uye yakasununguka. Yakakwana kune zvipfeko zvemitambo, kushingaira kupfeka, jersey yemitambo, sport top uye yakasununguka kupfeka etc. Tinogona kuita zvakasiyana-siyana zvemucheka maererano nezvinodiwa nemutengi, sekunyorova, kukurumidza-kuoma uye anti-bacte ...
100% Polyester yakarukwa shiri yeziso mesh jira rekushanda rinopfeka
Chigadzirwa Tsananguro: Iyi shiri yeziso mesh jira, chinyorwa chedu nhamba HS073, yakarukwa ne100% polyester. Birdeye fabric imhando yejira rinoshanda, rinozivikanwawo sejira rinopinza ziya, rinotaridza kuti shiri eye mesh jira jira rinofema zvakanyanya. shiri maziso mesh jira rinoshandiswa zvakanyanya kugadzira zvipfeko zvemitambo, izvo zvinonyanya kukonzerwa nekufema uye kunyura dikita. Tinogona kugadzira akasiyana basa remucheka ac ...
Kupisa kutengesa polyester spandex jacquard yakarukwa yakatambanudza jira rehembe
Tsanangudzo Yechigadzirwa: Iri jacquard rakarukwa jira, chinyorwa chedu nhamba HS662, yakarukwa ne94% polyester uye 6% spandex. Iri polyester spandex mesh jira rinofema, elastic uye rakasununguka, iro rinoita kuti rive jira rakakodzera chaizvo rehembe, zvipfeko zvemitambo, kushingaira kupfeka, yoga kupfeka, sport top, uye mapfekero akajairika etc. Tinogona kugadzira jira rakasiyana zvichienderana nezvinodiwa nemutengi, kunge kupukuta hunyoro, nekukurumidza-d...